Kongiri / asphalt musanganiswa
chinjana worktable internet laser yekucheka muchina
Kurarama bepa dzakateedzana chisvo
Musiki anocheka kazhinji ane zvikamu zvina, kusanganisira anocheka mazino (chiwanikwa), mucheki mutumbi, shizha remuchirimo uye circlip, nepo mazino mashoma chete ekucheka, muviri wemutemi uye circlip, nezvimwe. Kugaya kunoda kuti mazino akacheka achekere muvhu pakutanga . Naizvozvo, iwo anocheka mazino anofanirwa kunge ari ekushomeka kusagadzikana. Anocheka mazino anowanzo sinteredzwa neakakora Tungsten Cobalt chiwanikwa upfu munzvimbo yekutsvaira nzvimbo, uye ndokuzosunganidzwa mumutumbi wemuviri une maficha e simba rinoshanduka 2400n / mm² uye kuenzana pakati pe14.5-14.9cm³, inova yakakwira-density, yakakwira kupfeka-kuramba uye yakasimba kuvhunduka-kuramba.
Akacheka muviri unowanzo gadzirwa neasina kusagadzikana zvinhu 42Crmo uye inogadziriswa neCold Extrusion Molding Machine. Nesimba rakasimba rekushanduka uye kusasimba kwekupfeka, inoshandiswa kutsigira uye kuchengetedza meno ekucheka. Iyo denderedzwa ine yakakura kutenderera yakavharirwa pane chiuno chemucheka musoro, uyo unomanikidzwa nesimbi yakakungurutswa 65Mo yekukwirisa. Inogona kusimba kukiya yemucheka musoro kwenguva yakareba uye kuve nechokwadi chekuti mucheki musoro unogona kutenderera zvinoshanduka pachiteshi. Shizha remuchirimo rakakiiwa pane denderedzwa, iro rinogona kugonesa iro rinocheka musoro kuisa muchiteshi zviri nyore. Izvi hazvigone chete kugonesa kuungana kweanocheka musoro, asi zvakare chengetedza chiteshi zvinobudirira uye rega chive pasi peyakajairwa abrasion. Shizha remuchirimo rinowanzo gadzirwa nezvipfeko zvinodzivirira necold press technology. Hukukutu hwayo hunokosha vimbiso yekujairika kushandiswa kweanocheka musoro, nepo kudzima kwakakodzera kuomarara kunogona kuwedzera hupenyu hweanocheka. Iko kuomarara kwemutemi muviri kunodzorwa pakati pe44-48HRC uye iwo anocheka mazino akakomberedza 89HRA. Yakakwira-frequency sirivheri kana Nickel-based welding tekinoroji inoshandiswa kuve nechokwadi chekuti hapana-kudonha-kweiyo alloy cutter mazino.
Anoshanda musimboti weKugaya Kucheka Musoro
The azvikuya aricheke musoro kunokosha mukugadzira mugwagwa. Musoro unocheka unoshanda sewoko rweruboshwe uye rwerudyi, riri iro rinotarisira chikamu chakakosha kwazvo: Kugaya pamusoro. Kuti upedze iyo huru yekucheka, iyo yekucheka musoro inogadzirwa nehombe Tungsten carbide alloy particles uye yakabatana ne yakapfava Cobalt simbi, ine kuomarara kunogona kusvika kumusoro kwe1400HV. Kunyangwe iri pasi pekupisa-kwepamusoro uye yakakura velocity, inopa yakanakisa yekumisikidza kuramba uye kupfeka kuramba. Mucheka wekucheka uri muchimiro chekoni. Iyo diki yepamusoro dhayamita inogona kudzikisa koni kuita uye kuramba kana ichicheka ichienderera muvhu. Iyo hombe yepasi dhayamita yepamusoro inodzivirira kune ruoko shank. Iyo yekucheka pamucheto yakabatana kwazvo neiyo shank kuburikidza neakasarudzika simbi-braze kutenderera. Kunze kwekucheka mupendero, inobatawo iyo shank uye iyo yekukotama nguva ye6 tani-simba mune iyo 45 degree direction.
Iyo kiyi banga rekubata epamusoro uye ezasi zvikamu zvine akasiyana echimakanika zvinhu. Chikamu chepamusoro chine kukakavadzana nevhu uye chinokanda marara, izvo zvinoda kuomarara kwakanyanya. Iyo pole kubva kuchikamu chepazasi inopinza mune chiteshi chebanga kuti iite kukwenya. Kugadzikana kwakanaka kunotendera kuti itore mukati mekurova. Naizvozvo, banga rekubata rinofanirwa kunge riine maitiro maviri: yakasimba anti-kukweshera uye anti-kutyora. Kune trunk iri pakati, apo iyo clip clip inogona kudhonza banga kumucheto kubva kuchiteshi. Pasina iyo, mamwe mapanga anogona kutambanuka kubva kumashure kuburikidza nekuvhunduka kwebakatwa. Mashoma mashoma matsva ebanga ane maburi mumisoro yavo, ayo anogona kusimbisa kutenderera uye kudzivirira kusagadzikana kusabatana mukukonana nepasi.
Pashure: chinjana worktable internet laser yekucheka muchina
Zvadaro: Paver auger blade
Welder michina kambani
Anoshanda sei pavers
Iyo Brand New Screeds
Dapeng Industrial Park, Tongshan Dunhu, Xuzhou, Jiangsu, China
Mazuva manomwe pavhiki kubva 10:00 am kusvika 6:00 pm